होम आइसोलेसनमा कसरी बस्ने? यस्ता छन् १० मापदण्ड :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
होम आइसोलेसनमा कसरी बस्ने? यस्ता छन् १० मापदण्ड
स्वास्थ्यखबर आइतबार, भदौ २८, २०७७, ०६:००:००
नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या ५० हजार नाघिसकेको छ। यो उक्लन्दो संक्रमण दरको ग्राफसँगै संस्थागत आइसोलेसन र कोभिड अस्पतालका बेडहरु भरिँदै गएका छन्। अस्पतालमा भर्ना भई उपचार आवश्यक नभएका लक्षणविहीन तथा सामान्य लक्षण भएका संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहनसक्ने मापदण्ड लागू भएको छ।
महामारीजन्य रोगहरुलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जनस्वास्थ्यको भरपर्दो उपाय हो आइसोलेसन। क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसन विधिको उद्देश्य भनेको रोगको संक्रमणलाई रोक्नु वा फैलन नदिनु हो। सामान्य भाषामा बुझ्दा छुट्टै एकान्तबास वा अलग्गिनु नै आइसोलेसन हो। संस्थागत आइसोलेसन खाली भएन भने होम आइसोलेसनमा तोकिएका मापदण्डहरु अपनाएर बस्न सकिन्छ।
नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमणको सुरुवाती चरणमा लक्षण र चिह्नहरु कम देखिएका थिए। हाल आएर संक्रमितहरुमा श्वास फेर्न गाह्रो हुने, स्वाद तथा गन्ध थाहा नपाउने, खोकी लाग्ने, विना कारण ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षण तथा चिह्नहरु देखिन थालेका छन्। कोभिड महामारीको यो समयमा यस्ता लक्षण देखिएमा, आफ्नो स्वास्थ्य आफैंलाई अलिक असामान्य लागेमा वा बिरामी हुन लागेको जस्तो अनुभव भएमा सकेसम्म चाँडो परिवारका सदस्यहरुबाट अलग्गै रहनुपर्छ। त्यसपछि कोभिड–१९ को जाँच गर्नुपर्छ। परीक्षणमा नतिजा पोजेटिभ आएमा संस्थागत आइसोलेसन खाली भए सकेसम्म आइसोलेसन सेन्टरमा रहने यदि खाली नभए घरमा नै (होम) आइसोलेसनमा बस्न सकिन्छ।
४. पोषिलो खानेकुरा खाएर रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउनु आवश्यक भएकोले पर्याप्त पानी, फलफूल तथा झोलिलो र हाई प्रोटिन खानेकुराहरु सहितको सन्तुलित खानेकुरा खाने। खानेकुरा खाँदा र डेलिभर गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। जस्तो कि खाना खाने प्लेटहरु सहित संक्रमितको छुट्टै सेट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै संक्रमितले प्रयोग गरेपछिको फोहोर व्यवस्थापन समेत उचित तरिकाबाट हुनुपर्छ।
(धमला इटहरी उपमहानगरपालिकाको कोभिड–१९ होम आइसोलेसन अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्य हुन्।)
सरकारले प्रत्येक वडामा सामुदायिक नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउने ३५ मिनेट पहिले